INkomfa ye-14 yeHlabathi ye-gvSIG: “UQoqosho neMveliso” – iGeofumed
Ikhaya/GvSIG/Inkomfa ye-14 yeHlabathi ye-gvSIG: “UQoqosho neMveliso”
I-Higher Technical School of Geodesic, Cartographic and Topographic Engineering (Universitat Politècnica de València, eSpain) iya kubamba, unyaka omnye, iNkomfa yeZizwe ngezizwe ye-gvSIG , eya kubanjwa ukususela ngo-Oktobha 24 ukuya kwi-26 phantsi kwesiqubulo esithi "Uqoqosho kunye nemveliso " .
Ngexesha lenkomfa kuya kubakho iiseshoni ezahlukeneyo zenkcazo (Ulawulo lukamaspala, imeko kaxakeka, ezolimo ...), kwaye iindibano zocweyo ezininzi ziya kubanjwa, phakathi kwazo kukho ezo ze-gvSIG zisetyenziswe kwiJiology okanye kwindalo esingqongileyo, kunye ne-gvSIG yeFowuni.
Ukubhaliswa, zombini kwiindibano zocweyo kunye neeseshoni zokubonisa, akhululekile ngokupheleleyo (kunye nomthamo ophantsi).
Zombini ezi rekhodi zenziwe ngokuzimeleyo yamaphepha ukuba ngokusebenzisa ifomu ezikhoyo kwi-website ye-kwiNkomfa , kunye neendibano ukususela ngo-Oktobha 4 kwi .
Inkqubo epheleleyo iyatholakala kwi- .
 http://www.gvsig.com/es/ imicimbi / jornadas-gvsig / 14as- jornadas-gvsig / inscripcion
 http://www.gvsig.com/es/ imicimbi / jornadas-gvsig / 14as- jornadas-gvsig / inscripcion- iindibano zocweyo
 http://www.gvsig.com/es/ imicimbi / jornadas-gvsig / 14as- jornadas-gvsig / inkqubo